Kordhinta Helitaanka Fursadaha Waxay Furi Kartaa Awoodda Si Loogu Sameeyo Dhismayaasha Cusub
DARYEELKA Horumarinta Bulshada
DARYEELKA waxay ka caawisaa dhallinta iyo dhalinyarada qaangaarka ah inay wajahaan caqabado waaweyn si ay u helaan shaqo, degaan, iyo xasilooni dhaqaale. Iyadoo khibrad khaas ah oo ku saabsan adeegayaasha dambiilayaasha ah, dhalinyarada halista ku jira, iyo waalidiinta guri la'aanta ah iyo qoysaskooda, shaqaalaha EMERGE iyo xubnaha adeega AmeriCorps waxay u adeegaan in ka badan 3,000 oo qof oo dakhli hooseeya sannad kasta.
Tusaale ahaan nolol ay taabatay EMERGE waa Lydia, oo ah haweeney da 'yar oo shaqada ka luntay kadibna gurigeeda. Waxay uur leedahay, waxayna ka welwelsan tahay rajada mustaqbalka ilmaheeda. Waxay codsatay gargaar guud, laakiin waxay ogtahay inay u baahan tahay si ay u hesho xirfadaha suuqa. Markii ay bilowday raadinta fursado cusub, waxay ka baratay barnaamij tijaabo ah EMERGE.
"Waxaan qabaa in barnaamijka uu ahaa mid cajiib ah. Waxaan ahay qof maanta ah. " -HADDIA
Barnaamijka waxaa loogu talagalay inuu sahamiyo siyaabo cusub oo uu ula shaqeeyo MFIP (Barnaamijka Maalgelinta Qoyska Minnesota). Barnaamijkan, EMERGE waxay dadka ku dhiirigelisaa inay ka fekeraan fursadaha ka baxsan shaqo mushahar hooseeya. Qof kasta oo ka qaybqaata wuxuu daba galayaa tababbarashada waddada xirfadeed ee leh karti badan oo kasbasho. DARYEELKA wuxuu ka caawiyaa inuu ka saaro caqabadaha nidaamka caadiga ah, sida la'aanta guryaha la awoodi karo ama daryeelka ilmaha, markaa kaqeybgalayaashu waxay diiradda saari karaan dugsiga. Markii ay EMERGE ka caawisay guriyeynta deggan Lydia, waxay diyaar u ahayd inay ku nasto barnaamij shan sano ah oo ka mid ah Shaqaalaha Caafimaadka Bulshada.
Bilaabashadu maahan wax caqabad ah. Way adagtahay in lagu carqaladeeyo culeyska shaqada ee fasallada iyo baahida waalidnimo. "Waxaan kaliya u gudbiyay GED-da maqaarkayga sanka, sidaas darteed way adagtahay in la helo tan." Iyadoo taageero iyo dhiirigelin ka timid tababaraheeda, Lydia kaliya ma aysan dhameystirin tababarka; Waxay ku fiicnayd, iyada oo heleysa dhammaan A iyo B ee fasallada.
Sannadkii tagay, DARYEELKA waxay muujisay in marka ay ka qaybgalayaashu helaan fursad ay ku helaan tababaro tababar, xirfad shaqo, iyo caawimaad looga hortagayo caqabadaha sida guryaha iyo gaadiidka, waxay raaci karaan hadafyo cusub oo ay gaaraan heer sare. Kuwa ku dhammeeyey tababarka oo shaqeeya, celceliska mushaarka ayaa ku dhawaad $ 13 saacad, si ka sarreeya hadafka mashruuca la filayo. Lydia waxay ku faraxsan tahay inay qabatay fursadda. "Waxaan qabaa in barnaamijka uu ahaa mid cajiib ah. Waxaan ahay qof maanta ah. "
Marka la dhammaystirayo caddaynta, Lydia waxay heshay shaqo ay la socoto lamaanaha EMERGE Aagga Aagga Aagga Waqooyi (NAZ). Waxay ka shaqeyn doontaa inay xiriir la yeelato qoysaska Waqooyiga Minneapolis, si ay uga caawiyaan sidii ay u heli lahaayeen siyaabo lagu guuleysto, sidoo kale. Iyadoo la siinayo mushaarka la soo dhaweynayo, waxay ujeedadeedu tahay inay noqoto dood xooggan ee bulshada. Lydia waa diyaar. "Anigu waan ogahay inaanan awoodin inaan ku guuleysto tan iyada oo aan barnaamijka la siin."